Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha Faraca Midnimo iyo Dadweyne xerada Dhagaxley oo shir muhiim ah isugu yimid
Xubnaha Faraca Midnimo iyo Dadweyne xerada Dhagaxley oo shir muhiim ah isugu yimid
Maalin nimadii jamcaha taariikhduna ay kubeegnayd 22/11/13 waxaa xerada Dhagaxlay lagu qabtay shir aad u balaadhan oo ay kasoo qaybgaleen dad aad utiro badan oo xubnaha faraca MIDNIMO iyo dadwayne kale oo ay kamid yihiin odayaal, culimo-owdiin, aqoonyahan, dhalinyaro iyo haweena.
Shirka ayaa lafuray abaare 2:00 duhurnimo waxaana sidii caadada ahaydba lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uusoo jeediyay xafidahulaahu sheekh aadaan sheekha ayaa ayaa kudheeraaday jihaadka iyo waajibnimadiisa sadaqada iyo ajriga kujira iyo guud ahaan waa jibaadka saaran umada ree ogadenia.
Intaas kadib waxaa laguda galay ajandayaashii shirka oo uu shirgudoominayay gudoomiyaha faraca MIDNIMO halgame axmad daahir wuxuuna kudhawaaqay ujeedada shirkan looqabtay iyo halkudhaga sanadkan gudoomiyaha ayaa sheegay in uujiro abaabul guud oo loogu magacdara TAAGEER XORIYADA kaasoo kasoconaya guud ahaan dunida gaar ahaan xeryaha dhadhaab.
Intaas kadib waxaa madasha laga akhriyay taariikhkooban oo dib loogu milcsanayay gabood faladii kadhacay dhulka Ogadenia kuwaas oo laga xusay xasuuqii 15 NOV kadhacay magaalada Qabridahare ee lagu xasuuqay dhalinyaro maxaabiis ah kasoo laxusayay sanad guuradii 8aad ee kasoo wareegtay iyo gumaad kale oo kadhacay wadanka Ogadenia sida kii wardheer iyo kanoonigii dhagaxbuur iyo kuwo kale.
Sidoo kale waxaa lagusoo dhaweeyay abwaanka caanka ah ee Axmad sheekh Cali heelaale oo madasha kasoo jeediyay gabay qiiro badan galiyay bulshadii madasha fadhiday.
Waxaa isna goobta hadal aad uqiima badnaa kasoo jeediyay gudoomiyaha gudiga odayaasha ogadenia Saxane oo isna isbarbar dhig kusameeyay halgamadii hore iyo kan ay JWXO hogaaminayso wuxuuna sheegay in ay halgamadii hore dadaaleen laakiin ayna umadaxbanaanayn halgankooda laakiin kani uuyahay mid umadaxbanaan aaya katashigiisa wuxuuna dhalintii kudhiiri galiyay in loo wada istaago xoraynta dhulkeena.
Waxaa sidoo kale makarafoonka lagusoo dhaweeyay N/hure katirsan CWXO oo lagu magacaabo Taxaliil wuxuuna warbixin dheer kabixiyay xaalada uu kusuganyahay wadanka Ogadenia wuxuuna tibaaxay in ayna jirin maalin uu halganku kafiicanyahay wuxuu sidoo kale sheegay in wadankii uu kasocdo dagaal faraha laysulatagay oo udhaxeeya ciidanka wadaniga xoraynta Ogadenia iyo ciidanka gumaysiga halgamaa taxaliil ayaa kasheekeeyay dhacdooyin aad u xanuun badan oo lagusameeyay gabdho ree ogadenia ah oo ay ciidamada gumaysigu sixun uladhaqmeen wuxuuna kadheekeeyay gabadh xaamilo ah oo tuulada galadiid garaacis lagaga sooriday ilmo 7 bilood ah wuxuuna sheegay in ayna gabadhaasu warkahaynin xiliguu uu ilmahaasu soodhacayay garaacistii lagu samaynayay owgeed. N/huraha ayaa kasheekeeyay kufsi wadareed loogaystay gabdhaha ree ogadenia wuxuuna xusay 11 gabdhood oo hal guri ah lagu kufsaday tuulada Farmadow oo ay kufsadeen ciidan kabadan 300 oo itoobiyaan ah.
N/hure taxaliil ayaa dhalintii iyo dadkii madasha fadhiyay kula dardaarmay in ay fadhiga iskaga kacaan oo ayna joogin xero fulayda oo uu ulajeeday xeryaha qoxootiga.
Guntii iyo gaba gabadii shirka ayaa soo afmeermay abaare 4:30 galabnimo wuxuuna kudhamaaday guul iyo gomonimo loorajaynayay shacabka dulman ee ree ogadenia.